USA: 26 qof oo ku dhintay Weerarkii Kaniisad ku taal Texas |
USA: 26 qof oo ku dhintay Weerarkii Kaniisad ku taal Texas
Waxaa baaritaan lagu wadaa weerarkii Axadii shalay ka dhacay Kaniisad ku taal koonfurta gobalka Texas oo lagu dilay ugu yaraan 26 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur.
Weerarkan ka dhacay deegaanka Sutherland Springs ee gobalka Texas, waxaana geystay nin ku hubeysan hubka daraandooriga u dhaca oo rasaas ku furay kaniisadaasi xili ay ku sugnaayeen dad halkaasi ku cibaadeysanayey.
Ninkan ayaa sidoo kale gudaha u galay Kaniisadaasi isagoona rasaasta la beegsaday dhamaan dadkii goobtaasi ku sugnaa oo ay ku jireen caruur, 26ka qof ee dhintay ayaa la sheegay in 8 ruux ay kasoo wadajeedeen hal qoys, dadka dhaawaca soo gaaray ayaa iyaguna gaaraya 20 qof.
Waa weerarkii ugu xumaa ee ka dhaca gobalka Texas in muddo ah welina ma cada sababta ninkan uu u weeraray kaniisadaasi.
Mid kamid ah dadka ku nool xaafada ay kaniisadaasi ku taal ayaa isaguna rasaas ku riday ninka weerarka geystay oo goobta isaga cararay.
Booliiska oo isku dayey inay qabtaan ninkan ayaa muddo baacsanayey gaarigiisa kahor inta uusan gaarigaasi shil gelin, waxaana la sheegay in ninkaasi meydkiisa laga soo saaray gaariga, waxaan la ogeyn in ninkan uu isagu gacantiisa isku dilay ama ay dileen ciidamadii ku raadjoogay.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo hada safar shaqo ku jooga dalka Japan, ayaa saaka oo isniin ah sheegay in ninka weerarka geystay uu ahaa qof xanuunsan, isagoo ka weecday inuu ka hadlo dhibaatada Maraykanka ka heysata hubka faraha badan oo ay shacabka heystaan.